ချမ်းသာ ချင်တဲ့ သူတိုင်း သိထားသင့် တဲ့ သူဌေးတွေ့ရဲ့ ငွေ သုံးနည်း ( ၁၂ ) နည်း – Shwewiki.com
မရူး သွပ်ပါနဲ့! အမှန်တစ်ကယ်ချမ်းသာတဲ့ သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေကို social mediaပေါ်တင်ပြီး ဂယက်မထကျပါဘူး။ Mediaတွေဟာ လူချမ်းသာတွေရဲ့ စံအိမ်ခမ်းခမ်းနားနားကြီးတွေ၊ဈေးကြီးပေးရတဲ့ကားတွေနဲ့၊ ဇိမ်ခံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ဖော်ပြကျပါတယ်။ သင်သာ အဲ့ဒီ့ပုံတွေကိုမြင်ဖူးမယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့လိုချမ်းသာဖို့ဆိုတာ အိပ်မက်တစ်ခုလို ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူဌေးသူကြွယ်တွေဟာ သာမာန်လူ သာမာန်ဘဝပုံစံနဲ့ပဲနေကျတာပါ။
သူတို့ကိုအရမ်းကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသွားစေတဲ့အဓိ့ကအကြောင်းအရင်းကတော့ ခက်ခံပင်ပန်းစွာရှာလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကိုဘယ်လိုတွေစီမံအသုံးပြုသလဲဆိုတာ ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ငွေကိုစီမံအသုံးချပုံ ၁၂ချက်ကတော့_
လူချမ်းသာတွေဟာ သူတို့ရဲ့တစ်နေ့တာအချိန်ကို အရေးသိပ်မပါတဲ့ ဝယ်ယူမှုသေးသေးလေးတွေက အစ သေချာတွေးတောပြီး ကုန်ဆုံးပါတယ် …။
လူချမ်းသာတွေဟာသူတို့ရဲ့ ဘဝမှာ အကြွေးကင်းနိုင်သမျှ ကင်းအောင်နေထိုင်ပါတယ်။ အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုတောင် မသုံးကျပါဘူး …။
(3) ငွေစရင်းထားရှိပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း
သူတို့ဟာ 50/30/20 စည်းမျည်းကိုအထူးသဖြင့်သုံးကျပါတယ်။ဝင်ငွေရဲ့ 50%ကိုလိုအပ်မှုတွေအတွက်အသုံးချပါတယ် ။ ဝင်ငွေရဲ့30%ကို တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာရ အသုံးချဖို့အတွက် အသုံးပြုပြီး 20%ကိုတော့ ချေးငှါးခြင်းနဲ့ စုဆောင်းရာမှာ အသုံးပြုကြပါတယ် …။
လူချမ်းသာတွေဟာငွေကိုဘယ်လိုစု့ရမလဲဆိုတာကိုသိ့ကျပါတယ်။လိုချင်တာအကုန်လျောက်ဝယ်လို့မဖစ်တာကိုရောပေါ့။သာမာန်လူတွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့အချက်ကတော့သူတို့ဟာ ရေရှည်အာမခံမှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲအသုံးပြုကျတာပါ …။
လူချမ်းသာတွေဟာ သူတို့ကိုစိတ်ပင်ပန်းပြီး အချိန်ကုန်စေမယ့်အရာတွေကို ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းခိုင်းရမှာကို မရှက်ရွံနေပါဘူး …။
မီလီယမ်နာတွေဟာသူတို့ရဲ့အချိန်ဇယားမှာ ဘဝအတွေ့အကြုံရှာဖို့ကိုပါထည့်သွင်းထားကျတာပါ။သူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုကမ္ဘာသိ့အောင်ထုတ်ပြနေမယ့်အစားကမ္ဘာအနှံ့သွားလာပြီး ဘဝအတွေ့အကြုံ ကိုရှာကျပါတယ်။လေထီးခုန်တာတွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာခရီးတွေနဲ့ပေါ့ …။
တစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေဟာအသုံးမလိုတောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများကိုဝယ်ယူနေကျတာပါ။လူချမ်းသာတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဝယ်ယူရန်စရင်းနဲ့ ကြီးမားတဲ့ဝယ်ယူမှုတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး တွက်ချက်ကာ ဝယ်ယူကြပါတယ် …။
(10) ငွေမသုံရ နေ့(သို့မဟုတ်)ပိတ်ရက် သတ်မှတ်ပါ
ငွေမသုံးရ နေ့(သို့)ပိတ်ရက်ဆိုတာဟာ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ထိုအချိန်အတွင်းမှာ အရေးပေါ်ကိစ္စအတွက်ကလွဲပြီး အခြားအရာတွေအတွက် ငွေမသုံးမပြုတာပါ …။
သင့်အခွင့်အရေးတွေကိုဘယ်တော့မှလျော့မတွက်ပါနဲ့။ ကော်ဖီနဲ့မုန့်တွေ ညသွားဝယ်နေမယ့်အစား သင့်အခွင့်အရေးကိုအမိအရ ဆုပ်ကိုင်ပါ …။
ရင်းနီမြုတ်နှံရတာကို ကြိုက်တဲ့ လူချမ်းသာတွေဟာ ဝယ်ယူရတာတွေကို နှစ်သက်ကျပါတယ်။ဒါပေမယ့် ပျက်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို လွှင့်ပြစ့်မယ့်အစား ပြင်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားကျသူတွေပါ …။ ။
မရူး သှပျပါနဲ့! အမှနျတဈကယျခမျြးသာတဲ့ သူတှဟော သူတို့ရဲ့ကွှယျဝမှုတှေ ဘဝနထေိုငျမှုပုံစံတှကေို social mediaပျေါတငျပွီး ဂယကျမထကပြါဘူး။ Mediaတှဟော လူခမျြးသာတှရေဲ့ စံအိမျခမျးခမျးနားနားကွီးတှေ၊စြေးကွီးပေးရတဲ့ကားတှနေဲ့၊ ဇိမျခံအသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှကေို ဖျောပွကပြါတယျ။ သငျသာ အဲ့ဒီ့ပုံတှကေိုမွငျဖူးမယျဆိုရငျတော့ သူတို့လိုခမျြးသာဖို့ဆိုတာ အိပျမကျတဈခုလို ဖွဈနမှောပါ။ ဒါပမေဲ့ သူဌေးသူကွှယျတှဟော သာမာနျလူ သာမာနျဘဝပုံစံနဲ့ပဲနကေတြာပါ။